डब्लुएचओले दियो संसारलाई त्रसित गराउने खबर ! अब बन्द गर्नै पर्छ? – Kavrepati
Home / समाचार / डब्लुएचओले दियो संसारलाई त्रसित गराउने खबर ! अब बन्द गर्नै पर्छ?
admin August 6, 2021	समाचार Leaveacomment 324 Views
सङ्क्रमितहरुको कुल सङ्ख्याका आधारमा अमेरिका सवैभन्दा अगाडि रहेको छ भने भारत, ब्राजिल, रुस, फ्रान्स, बेलायतलगायतका देशहरुले क्रमशः अमेरिकालाई प’छ्याइरहेका छन्। कतिपय देशहरुमा भाइरसको चौथो चरणको महामारी समेत सुरु भएको छ। त्यसैगरी अल्फा भेरियन्ट १८२ देशमा, बेटा भेरियन्ट १३१ देशमा र गाम्मा भेरियन्ट ८१ देशमा पुगेको पनि डब्लुएचओले जनाएको छ ।
Previous वि.सं.२०७८ साल साउन २२ गते शुक्रबार हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
Next टिकटकमा भाईरल जोडी सरोज र बिनाले बिहे गरे । सरोजले सिन्दुर हाल्दा बिहेकै दिन टिकटकको निहुमा झगडा (भिडियो हेर्नुहोस)